VIDEO - ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သောလေများသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
VIDEO - ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သောလေသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
မော်နီကာဆန် | | ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း
Homo sapiens သည်၎င်း၏အသွင်အပြင် မှစ၍ အမြဲတမ်းသိလိုသည်။ သိချင်စိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမွေးဖွားလာသည့်အရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်တစ်ခုထက်ပိုပြီးရူးသွပ်နိုင်သောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦး ဆောင်စေသည်။ ဟာရီကိန်းသို့မဟုတ်လေဆင်နှာမောင်းကဲ့သို့သောရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၊ ကျနော်တို့တတ်နိုင်သလောက်နီးစပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်လုပ်ဖို့သူတွေကိုရှိပါတယ်.
ကျွမ်းကျင်သူများက မုန်တိုင်းတိုက်ခတ် သူတို့သည်လုံခြုံစွာပြုလုပ်ကြပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်သင့်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်သဘာဝစွမ်းအားကိုဆန့်ကျင်။ ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။ ဤနမူနာသည်ဥက္ကာဗေဒပညာရှင် Jim Cantore ပြုလုပ်ခဲ့သောဤစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပြီး The Weather Channel ၏ယူကျုချန်နယ်တွင်တင်ခဲ့သည်။
1 Jim Cantore နှင့်ဟာရီကိန်းအားတိုက်ခတ်သောလေများ
Jim Cantore နှင့်ဟာရီကိန်းအားတိုက်ခတ်သောလေများ
ငါ YouTube ကိုတင်လိုက်သောမာရီယာဟာရီကိန်း၏ဗွီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်ပထမဆုံးစဉ်းစားမိတာက "Jim Cantore သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရူးများကိုထပ်လုပ်နေသလား" ဒီကတိက ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့, နောက်တဖန်။ မင်းမှတ်မိမလားမသိဘူး ဆောင်းပါး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ Cantore ရဲ့သရုပ်ဆောင်တဲ့ဗွီဒီယိုနဲ့အတူငါတို့ထုတ်ဝေခဲ့တာကတော့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မိုa်းပွင့်နှင်းဖုံးလွှမ်းနေတဲ့နေရာမှာလျှပ်စီးတွေကျဆင်းသွားတာကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အံ့သြစရာကောင်းပြီးပျော်ရွှင်မိခဲ့တယ်။ အဖြစ်ကောင်းစွာ, ယခုတွင်သင်သည်လေတိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီး Category5ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း၏ပုံစံပြုအင်အားကိုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်.
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, လျော့နည်းကနေပိုပြီးသွားသည်။ သင်ခံစားနေရသည့်အရာကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်ရန်သင်ဟာဟာရီကိန်းအမျိုးအစားများနှင့်သူတို့၏အားသာချက်များကိုသိဖို့လိုသည်။
အမျိုးအစား ၁ သူများသည်ပါးပြင်ပေါ်ရှိအရေပြားများရွေ့လျားသွားပြီးသင်၏ဟန်ချက်ကိုပျောက်စေသည့်အတွက်လုံလောက်မှုမရှိပေ။ အကယ်၍ သင်သည်မျက်နှာ၌တိုက်ရိုက်ထိမိလျှင်၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်အတော်လေးသိသာထင်ရှားသည်။ အကယ်၍ သူတို့ကအမျိုးအစား ၅ လေဖြစ်တယ်ဆိုရင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီအင်အားကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြproblemနာမှမရှိဘဲပျံသန်းစေနိုင်တယ်။
ပြီးတော့ Cantore ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။ စံချိန်တင်အောင်မြင်ပြီကျေနပ်
အရေးကြီးဖြေ။ ။ အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုရင်တောင်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနဲ့မနီးဘူး။ ဟာရီကိန်းသို့မဟုတ်လေဆင်နှာမောင်းဖြစ်လျှင်အန္တရာယ်ကင်းသောနေရာများတွင်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရမည်။ ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်များကိုအမြဲသတိထားရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း » VIDEO - ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သောလေသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။